किन डरायो दर्शक प्रतिक्रियासँग मह जोडी ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
किन डरायो दर्शक प्रतिक्रियासँग मह जोडी ?
चलचित्र ‘शत्रु गते’ बाट चलचित्र निर्माणमा फर्किएका मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पछिल्लो पटक निर्माण गरेको चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ दुई वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको थियो, जुन ६ दिन अगाडि यूट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । हास्य कलाकार किरण केसीका छोरा सुदन केसीले निर्देशन गरेको चलचित्रमा अमेरिका जान मरिहत्ते गर्ने एक परिवारको कथालाई पेश गरिएको छ ।
चलचित्रमा मह जोडीसँगै निरुता सिंह, पुष्प खड्का, आँचल शर्मा, वर्षा राउत, मोहितवंश आचार्य, किरण केसी, राजाराम पौडेल, बसुन्धरा भुषाल, शिवहरी पौडेललगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । चलचित्रको कथा हरिवंश आचार्य स्वयंले तयार पारेका हुन् । समीक्षक र दर्शकबाट अत्यन्त कमजोर प्रतिक्रिया बटुलेको चलचित्रले बक्सअफिसमा भने हिटको व्यापार गरेको थियो ।
हलमा खराब प्रतिक्रिया बटुलेको चलचित्रलाई यूट्युबमा पनि गाली आउने बुझेर हुनसक्छ निर्माण टिमले यूट्युबमा कमेन्ट सेक्सन बन्द गरेको छ । दर्शकले चलचित्र हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन पाएका छैनन् । दर्शक प्रतिक्रियासँग डराएर मह जोडीले कमेन्ट सेक्सन बन्द गरेको हुनसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ । यद्यपि, कमेन्ट सेक्सन बन्द गर्नुको कारण मह जोडीले खुलाएको छैन ।
नेपालको यूट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा रहेको फिल्म मह सञ्चारको यूट्युब च्यानलमा उपलब्ध छ । यूट्युब रिलिजको ६ दिनमा २० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको चलचित्रलाई ४३ हजार लाइक्स मिलेको छ । हलमा चलचित्रलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि कलाकार आचार्यले नाटकको शैली चलचित्र निर्माण गरेका कारण दर्शक कन्भिन्स हुन नसकेको बताएका थिए ।